Famaritana aretin-koditra ao amin'ny Chemistry
Ny famoloana dia faritana amin'ny toetr'andro avy amin'ny toetry ny tosi-drà mankany amin'ny toeram- pitrandrahana , matetika mitranga rehefa mihamafana ny tondra-drano . Amin'ny tsindohin-koditra, ny tsindry amin'ny vovo-tsoratry ny rano dia mitovy amin'ny fanerena avy any ivelany amin'ny ety ivelany.
Fantatra ihany koa: Teny roa hafa amin'ny fanambadiana no mampihetsi-po sy manaparitaka .
Ny ohatra tsara amin'ny fahandroana dia hita rehefa mihamafana ny rano mandra-pahatonga azy ho loto.
Ny tebitebin'ny rano madio eo amin'ny ranomasina dia 212 ° F (100 ° C). Ny bubbles izay mamorona ao anaty rano dia ahitana ny vovo-drano ateraky ny rano. Mihamitombo ny blasaka rehefa manakaiky kokoa ny faritra izy ireo satria misy ny tsindry hazokely amin'izy ireo.
Ao anatin'ny dingan'ny fandroana , dia mety hivoatra avy amin'ny diplaipan-tsolika mankany amin'ny vanin-tsolika. Na izany aza, ny fampangatsiahana sy ny fikajiana dia tsy midika hoe zavatra mitovy. Ny fanotrehana dia manerana ny habetsaky ny rano, fa ny fahatapahana dia tsy miseho afa-tsy eo amin'ny sehatra eo anelanelan'ny rano sy ny manodidina azy. Ny bubbles izay mipoitra mandritra ny fanotaniana dia tsy mitambatra mandritra ny fandroana. Amin'ny fandroana, ny molekiolan'ny ranoka dia samy manana ny soatoavin'ny angovo kinetsy avy.
Famaritana ny endriky ny efôko
Fanapariahana Force Dispersion ao Londres
Famaritana ny volan'ny atomika
Inona ny singa ao amin'ny Chemistry? Famaritana sy ohatra
Fanamafisana orina matanjaka sy ohatra
Famaritana ny atao hoe emulsifier - Agent emulsifier
Bronsted Lowry Teory amin'ny Acids sy Bases
Fanondroana ny Vondrona Carboxyl sy ny ohatra
SMITH - Ny dikany sy ny niaviany
Vita ny lalana ny fiaramanidina
Mercury amin'ny voan'ny kansera - Famantarana ny kanseranao
San Quentin - Fonjan'i Old California
Fampahafantarana ny zavakanto
Ny Batista Biography - Ny Bibidia Mitifitra ny Mpandringana
Ny Vatana eo ambanin'ny Bed
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny Visa mpifindra monina sy ny tsy fisian'ny Visa?
Famaritana sy anarana avy amin'ny SINCLAIR
Ady Mangatsiaka: Lockheed U-2
Ahoana no hahalalan'ny tsy mino an'Andriamanitra tsy misy Andriamanitra? Eny, ahoana no ahafahan'ny teôstista?
10 Fikarohana ireo Loharanom-pitaovan'ny LSAT Online
Ahoana no hanatsarana ny mozika Ford Mustang
Famakafakana ny tontolo tsy hita maso afenina
Ady faharoa ady: Battle of the Trebia
Ny toetr'andro momba ny ngovo
BIP: Ny drafitr'asa fampidiran-dra
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny anglisy
Free School Public Online ao Oregon
Ny fomba hahatongavana ho olimpika Track and Olympika
Fantaro ny tovovavy
Mpanoratra momba ny fanoratana: Ny fomba famaritana
Adiresin'ny Warner Pacific College